တဲအိမ်လေးထဲ သိပ်ထားခဲ့ရင်းပျောက်သွားခဲ့တဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့အဖြစ်ဆိုး
zawgyi တဲအိမ်လေးထဲ သိပ်ထားခဲ့ရင်း ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေးက ဒီ မြေစိုက်တဲအိမ်ငယ်လေးထဲမှာ ရင်နင့်စရာ အဖြစ်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် ညပိုင်းကပါ။ ည ၉ နာရီလောက်မှာ ကလေးအိပ်ပျော်နေချိန် မိဘတွေက ခဏထားအပြင်သွားတုန်း ၅ နှစ်သမီးလေးဟာ ဒီတဲအိမ်လေးကနေ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘာတွေက အိမ်ပြန်ရောက်ပေမယ့် ခြင်ထောင်ထဲကလေးအိပ်နေတယ်ပဲမှတ်နေခဲ့တာကြောင့် ည ၁၁ လောက်မှ ကကလေးပျောက်နေမှန်းသိခဲ့တာပါ။ နောက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ရေမြောင်းထဲမှာ… Read More
“​အောင်​လအန်​ဆန်း ​ပေး​သော သင်​ခန်းစာ”
“​အောင်​လအန်​ဆန်း ​ပေး​သော သင်​ခန်းစာ” နာမည်​​လေး နှစ်​လက်​မ​လောက်​ ကြီးတဲ့သူ​တွေကအဆင့်​မြင့်​စား​သောက်​ဆိုင်​ကစား​ကောင်း​သောက်​ဖွယ်​​တွေကို ဓာတ်​ပုံရိုက်​ပြီးခမ်းခမ်းနားနား စားပြ​နေကြသူ​တွေကြား…
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် အနုပညာလောကကနေ ကျောခိုင်းခဲ့ရသူတစ်ယောက်
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ – အဲသည်နေ့က သူ ယဉ်း နည်းနည်းထနေတာ။ မူးယစ်ဆေးဝါး နံပါတ်ဖိုးထိုးဖို့ အပ်ကို သူရှာလိုက်တာ ပေါ့။ ဆေးကို မိုးရေတွေနဲ့ဖျော်ပြီး သူ့ရဲ့ လက်ဖျံရိုးထဲ ထည့်ထိုးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အခန်းတံခါးဝမှာ ပေါ်လာတာက သူ့ရဲ့ အမေပါ။ သူပစ္စည်းတွေကို လုံးဝသိမ်းလို့မမီ တော့ဘူး။ သူအခါတိုင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင် တိုင်ပင်ကိုက် ထားတာတောင် သူ့အဖြစ် အပျက်လောက် တိုင်ပင်မကိုက်နိုင်တော့ပါ ဘူး၊ ဘိန်းဖြူထိုးရင်းတန်းလန်းမှာပဲ သူ့ အမေတွေ့သွားတာကြောင့် ဘယ်လိုမှ ရှင်းပြချိန် မရလိုက်ပါဘူး။… Read More
စားချင်စဖွယ် အရမ်းအရသာရှိတဲ့ ပြည်ပလာချက်နည်း
zawgyi ပြည်ပလာတာ စားဖူးပြီလား ? အခြားမြို့တွေနဲ့ မတူပဲ အရသာကောင်းလွန်းလို့ ပြည်သူ/သားတွေ နှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးကြပါတယ်။ ပဲမှုန့်နဲ့ချက်ထားတဲ့ ပလာတာအရည်ကို အီကြာကွေး၊ စမူဆာ၊ နံပြား၊ ပလာတာဖတ်တို့နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်သလို တွဲဖက်စားသုံးကြပြီး ပလာတာပူပူလေးကို သံပုရာသီးညှစ် ငရုတ်သီးစိမ်းလေးညှပ်ထည့်ပြီး ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီလေး ထည့်စားတတ်ကြပါတယ်။ ပလာတာအရည်ထဲမှာ အာလူးအလုံးလေးများနှင့် ကြက်သားကို ဆီပြန်ချက်ပြီး ထည့်ထားလို့ အရသာလိုက်ဖက်ညီစွာ အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်။ နံနက်စာ၊ ညနေစာအဖြစ် စားသုံးကြပြီး ညစာအဖြစ် ထမင်းနှင့် စားသုံးကြသူများရှိသလို ပလာတာအရည်တွင် ထည့်ချက်သော ကြက်ရိုး၊ ကြက်ခြေထောက်ကို… Read More
အမှိုက်ပုံးထဲကို လွှင့်မပစ်သင့်တဲ့ အသီးအနှံ အစိတ်အပိုင်း ၄ မျို
အမှိုက်ပုံးထဲကို လွှင့်မပစ်သင့်တဲ့ အသီးအနှံ အစိတ်အပိုင်း ၄ မျိုးလွှင့်မပစ်သင့်တဲ့ အသီးအနှံ အစိတ်အပိုင်းများ အသီးအနှံတွေကို စားသုံးပြီးတဲ့အခါ အသီးအနှံတွေရဲ့အခွံတွေကို အမှိုက်ပုံးထဲကို လွှင့်ပစ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ အသီးအနှံတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာဆိုရင် သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးတည့်တဲ့နေရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်လိုအသီးအနှံတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းကို မလွှင့်ပစ်သင့်ဘူးလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ငှက်ပျောသီးခွံ ငှက်ပျောသီးစားပြီးတဲ့အခါ လွှင့်ပစ်လေ့ရှိတဲ့ ငှက်ပျောသီးခွံမှာ Tryptophan ဆိုတဲ့ ဓာတ်တမျိုး ပါဝင်ပြီး ဒါဟာဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး အာရုံကြောစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးခွံကို… Read More
ကော်​ဖီထဲ အိပ်ဆေးထည့်တိုက်​ပြီး​အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သော အမျိုးသမီးကိုလင်သားကိုယ်တိုင်အမိဖမ်း
ယောကျာ်းကို ​ကော်​ဖီထဲ အိပ်ဆေးထည့်တိုက်​ပြီး​အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သော အမျိုးသမီး အမှုဖွင့်​ခံရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေါမြို့တွင်ယောကျာ်းဖြစ်သူအား ကော်ဖီထဲအိပ်ဆေးထည့်တိုက်ပြီး အခြား အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သည် ဟုဆိုသောအမျိုး သမီးကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်တိုင်တန်းထားကြောင်း ဝေါမြို့မ ရဲစခန်းမှသိရသည်။ ဖြစ်​စဉ်​မှာ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်​​နေ့က ပဲခူးတ်ိုင်း​ဒေသကြီး ​ဝေါမြို့နယ်​ ဂုံမင်းကန်​​ကျေးရွာ​နေသူကိုသန်းဦး အား ဇနီးသည်​ မ . . . က ​​ကော်​ဖီတိုက်​လိုက်​တိုင်း ၄င်းအိပ်​​ပျော်​သွားချိန်​တွင်​တစ်​ရွာထဲ​နေ ကိုမင်းနိုင်​ဆိုသူနဲ့​အိမ်​​ထောင်​​ရေး​ဖောက်​ပြန်​​နေသဖြင့်​ ရဲစခန်း တွင်​အမှုဖွင့်​တိုင်​ကြားခြင်းဖြစ်​ကြောင်း ကနဦးတိုင်​တန်းချက်​သတင်း​အရသိရသည်​။ ​ကော်​ဖီ တိုက်​လိုက်​တိုင်း… Read More
ငါ ! ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားကွ ။နောက်ခန်းထဲမှာ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစားပါတယ် ။စသည့်ဝိတ်သုံးပြီးစကားဆိုခဲ့သူကိုဥပဒေဘောင်တွင်းကပြန်လှန်နှိမ်ကွပ်ခဲ့သော ရဲတယောက် ။ ။ “ဟေ့ကောင် ငါ ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားနော်” တဲ့ ကြည့် ဘာမှတောင်မပြောရသေးဘူးကားလေးတားမိတာနဲ့တန်းပြောတာ ငါဗိုလ်မှူးအငြိ်မ်းစားနော်တဲ့ ဝိတ်သုံးတဲ့သဘောလား ခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့သဘောလားတော့မသိ x”ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးခင်ဗျာ လိုင်စင်နဲ့ဝှီးတတ်လေး ပြပေးပါဗျ” ထိုလူကအမောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပြတယ် ဝှီးတတ်ကတော့မပါဘူးတဲ့ဝှီးတက်ပါမလာဘူးဆိုတော့ ထုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ ယာဉ်တစ်စီးမှာပါလာရမဲ့ လိုင်စင်ဝှီးတတ်တို့အကြောင်းရှင်းပြမိတယ် xမပါလာခဲ့ပြန်ရင်လဲ ချလန်လေးတွေဖြတ်ကြရပီး သက်ဆိုင်ရာရုံးမှာပြန်လည်ရွေးယူရမဲ့အကြောင်းရောပေါ့ x” မင်းချလန်ဖြတ်မလို့လား” x”ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်မှူးခင်ဗျ တပည့်တို့ဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပါဗျ” x”မင်းဖြတ်စရာမလိုဘူး ငါ ဖုန်းဆက်မယ်” ထိုသူဖုန်းဆက်တယ် ကျွန်တော်စောင့်နေပေးပါတယ် ဘာမှတော့ထူးူမလာပါဘူး… Read More
ဒွေးလို မင်းသား အခုထိ မပေါ်သေးဘူး ဆိုတဲ့ ချိုပြုံ
ဒွေးဆိုတာကတော့ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ သူ့ခေတ်တခေတ်လောက်ကို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သဘာဝမင်းသားတယောက် ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးလည်း သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံမကောင်းစွာနဲ့ ဒွေး ကတော့ အချိန်မလွန်ခင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူလို့မျိုး မင်းသား သူ့လိုမျိုး အိုက်တင်ကိုတော့ တော်ရုံလိုက်မမှီကြပါဘူး။ ဒွေးကို နှမြောတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ အများပြားရှိပြီး အဲ့ထဲမှာတော့ ချိုပြုံးလည်းပါပါတယ်။ ချိုပြုံးကတော့ ဒွေးလို မင်းသားမျိုး အနုပညာလောကမှာ ပေါ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပြီး ဒွေး ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၁ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ စကားပြောကြားသွား ခဲ့ပါ တယ်။… Read More
၂၃ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်များ အကုန်ပါတယ်နော်
၂၃ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဉ် သိန်း ၁၀၀၀၀ ယ ၉၄၅၁၅၀ မိုးယံ သိန်း ၅၀၀၀ ဍ ၈၆၆၅၈၇ မိုးယံ သိန်း ၅၀၀၀ သ ၃၄၀၂၈၇ သိန်း ၃၀၀၀ ကဍ ၅၇၈၂၂၇ သိန်း ၃၀၀၀ န ၁၁၅၈၉၀ မိုးယံ သိန်း ၃၀၀၀ ကခ ၁၂၈၈၃၆ မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀ ကဎ ၈၄၀၅၂၇ မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀ ခ ၁၁၇၁၀၄ မိုးယံ သိန်း… Read More
နာမည်ကျော်အဆိုတော်ကြီး တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ သမီး အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန် ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ရွှေရည်သိန်းတန်တယောက်ကတော့ သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သာယာတဲ့သူ့အိမ်ထောင်ရေးကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ The Radar နဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ “ယောကျာ်းကတော့ အစပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ပါတယ်။ အခုတော့ မလုပ်တော့ပါဘူး။ ရွှေရည်ကတော့ လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူလည်းအလုပ်လုပ် ရွှေရည်လည်း အလုပ်လုပ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဝေးကွာတာတွေ ရှိလာမယ်။ ပြီးတော့ အပြင်မှာလည်း… Read More
Cooking Food and Meal